Waa Maxay Dhibcaha Deynta Wanaagsan? Guudmarka, Sida Looga Hortago
Bogga ugu weyn Waa Maxay Dhibcaha Deynta Wanaagsan? Guudmarka, Sida Looga Hortago
Isha Sawirka: nerdwallet.com
Dhaqaalaha iyo wax kasta oo ay ku jirto, dhibcaha dhibcaha ee qofku leeyahay ayaa weli ah qayb muhiim ah oo ka mid ah waxa loo qaadanayo aqoonsiga.
Hay'adaha maaliyadeed, amaahiyaha, loo -shaqeeyayaasha, dawladda, iwm waxay qaadanayaan aqoonsiga dhibcaha dhibcaha ka hor intaanay ku siin gargaar ama adeegyo gaar ah.
Maqaalkan, waxaan ku faahfaahineynaa oo uga jawaabi doonnaa su'aalaha ku xeeran waa maxay dhibcaha dhibcaha wanaagsan? Maxaan u aragnaa dhibcaha dhibcaha ee wanaagsan iyo waa maxay dhibcaha dhibcaha wanaagsan ee lagu iibsado guri? Waa maxay dhibcaha amaahda kaamil ah iyo sidoo kale sida loo gaaro dhibcaha dhibcaha wanaagsan?
Iyada oo la kaashanayo saaxiibbadayada cilmi -baarista iyo khubarada warshadaha, waxaan awoodnay inaan jebinno dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato dhibcaha dhibcaha iyo sida loo xisaabiyo dhibcaha dhibcaha.
Akhriso: Waxaan haystaa Dhibco Dhibco oo Xun, Beddel Kaararkan Deynta ah
Waa maxay Dhibcaha amaahdu?
Dhibcaha amaahda ayaa si fudud loogu dhigi karaa lambar u dhexeeya 300 iyo 850 oo loo adeegsaday matalaadda kala -duwanaanshaha midnimada qofka.
Dhibcaha dhibcahaaga waxaa lagu helay xog laga helay taariikhda macaamil maaliyadeed.
Digitization -ka qaybta maaliyadeed ayaa aad u fududeeyay helitaanka dhibcaha dhibcaha ee shaqsiyaadka.
Akhri Sidoo kale: Amaahda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Deynta Xun ee 2021
Sidee Loo Xisaabiyaa Dhibcaha Dhibcaha?
Markaan sharaxnay waxaan ula jeedno dhibcaha dhibcaha, waa sax inaan kuu sheegno sida tirada dhibcaha dhibcaha loo gaaray. Deyn -bixiyeyaasha iyo hay'aduhu waxay isticmaalaan boqolkiiba waxqabadyada maaliyadeed qaarkood sida hoos ku taxan.
Taariikhda lacag bixinta (35%)
Lacagta lagu leeyahay (30%)
Dhererka taariikhda amaahda (15%)
Deynta cusub (10%)
Isku darka amaahda (10%)
Taariikhdaada deynta ayaa xuseysa inta jeer ee aad deyn bixineyso. Waxay muujineysaa faahfaahinta lacag -bixinnada aad seegtay, tirada akoonnada deynta ee aad leedahay, iyo sida aad ula socoto.
Intaa waxaa dheer, faahfaahinta lifaaqyada mushaharka, la -wareegisyada, musalafnimada iyo sidoo kale amaahda sinnaanta guriga dhammaantood waxay ku jiraan taariikhda lacag -bixinta.
Sidaa darteed, waxaad u badan tahay inaad kasbato kalsoonida amaahiyaha haddii aad hayso taariikh lacag bixin oo wanaagsan ama dhexdhexaad ah. Dhanka kale
Dhab ahaantii, waxa loo tixgeliyey dhibcaha amaahda ee wanaagsan waa taariikh lacag bixin oo wanaagsan.
Lacagta lagu leeyahay:
Arrin kale oo muhiim u ah dhibcaha dhibcahaaga ayaa ah xaddiga aad hadda ku leedahay. Tan waxaa lagu hubiyaa marka loo eego caddadka aad hadda qiimayso.
Halkan, amaahiyayaashu waxay raadinayaan inay ogaadaan haddii aad ku nooshahay xadka amaahdaada ama 30 % saamiga loo qoondeeyay.
Intaa waxaa dheer, tirada xisaabaadka aad hadda maamusho ayaa waliba door weyn leh.
Haddii aad ku leedahay deymo badan xisaabaadyo badan oo aad maamusho, kuma muujineyso dhibco amaah oo wanaagsan.
Dhererka taariikhda amaahda:
Waxa halkan lagu xisaabiyey waa ilaa intee ayaad awoodday inaad sii waddo taariikhda amaahda ee wanaagsan.
Qof haysta taariikh deyn oo wanaagsan muddo ka badan 8 sano ayaa ka dhibco badan dhibcihii uu haystay taariikh deyn oo wanaagsan 3 sano.
Isku -darka Deynta:
In kasta oo ay ka kooban tahay kaliya 5%. ee waxa loo tixgeliyo dhibcaha amaahda ee wanaagsan, waa, si kastaba ha ahaatee, waa muhiim inaad muujiso maaraynta wanaagsan ee cutubyada deynta badan.
Isku -darka amaahda ee halkan waxaa loola jeedaa sida aad u maareyn karto unugyo badan oo deyn ah sida kaararka deynta, kaararka dukaanka tafaariiqda, kaararka saldhigga gaaska, khadadka deynta.
Waxay kaloo tixgelinaysaa maaraynta amaahda baabuurka, amaahda ardayda, Amaahda guryaha, iwm
Deynta Cusub waxaa loola jeedaa inta jeer ee aad dalbato amaahda iyo deynta. Haddii aad caado u tahay dalbashada amaahda si joogto ah waxay dhaawici doontaa dhibcaha dhibcahaaga.
Sababtoo ah waxay muujineysaa amaahiyaha inaad noqon karto mid aan la isku halleyn karin oo ku noolaan kara sumcadda.
Xisaabiyeha dhibcaha dhibcaha ayaa fiiriya waxaas oo dhan isagoo go'aaminaya inta dhibcaha dhibcahaaga.
Waxaa jira shirkado badan oo gorfeeya dhibcaha dhibcaha. Goobaha sida nuqdad iyo FICO wax badan bay caawisaa haddii aad rabto inaad xisaabiso dhibcaha dhibcaha onlaynka.
Waa Maxay Dhibcaha Deynta Wanaagsan?
Sidii aan hore u sheegnay, dhibcaha dhibcaha waxay u dhexeeyaan 300 ilaa 850. Xaddigaan, tirada sare ayaa ka fiican dhibcaha dhibcaha. In kasta oo lambarka hoose uu ka sii xun yahay dhibcaha dhibcahaaga.
In kasta oo kala duwanaanshaha baaxadda inta badan ay ku xiran tahay qaabka dhibcaha.
Guud ahaan, shakhsiyaadka leh dhibcaha dhibcaha ee u dhexeeya 580-669 waxaa loo tixgeliyaa inay caddaalad yihiin, 670 illaa 739 waxaa loo tixgeliyaa inay wanaagsan yihiin; 740 ilaa 799 waxaa loo tixgeliyaa inay aad u wanaagsan yihiin.
Kuwa ku jira xadka 800 waxaa loo tixgeliyaa inay aad u fiican yihiin waxayna u badan tahay inay helaan oggolaansho deyn degdeg ah.
Intaa waxaa sii dheer, iyadoo ku saleysan nooca amaahda la dalbaday, qaar ka mid ah deyn -bixiyayaasha ayaa laga yaabaa inaysan tixgelin dhammaan shanta qaybood ee hore loo sheegay (Taariikhda Bixinta, Lacagta lagu leeyahay, Muddada Taariikhda Deynta, isku -darka amaahda, Isku -darka Cusub).
Si kastaba ha ahaatee, sidaan hore u sheegnay waxay ku xiran tahay nooca amaahda la dalbaday. Qaar ka mid ah dayn-bixiyeyaasha ayaa sidoo kale ku kala duwan baaxadda, qaar waxay u tixgeliyaan 580-669 inay tahay calan gaduud halka kuwa kalena ay tixgeliyaan 580-669 caddaalad ku filan.
Sida loo gaaro Dhibcaha Deynta Wanaagsan
Gaaritaanka dhibcaha dhibcaha oo wanaagsan waa mid la gaari karo waxayna u baahan doontaa heshiis wanaagsan oo edbin maaliyadeed.
Hubi inaad isku daydo intii aad awooddo si aad mar walba u hubiso taariikhdaada deynta. Fiiri meelaha aad ka maqan tahay oo isku day inaad saxdo.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale liis garaynay waxyaabo ay tahay inaad samayso haddii aad fiirineyso sida loo gaaro dhibcaha dhibcaha wanaagsan.
Bixinta Biilasha Wakhtiga: Deyn -bixiyeyaashu had iyo jeer waxay eegi doonaan sida ugu dhakhsaha badan ee aad uga jawaabto biilasha. Lacag -bixinta dambe ama lacag -bixinta la dhaafiyey ayaa lagu wargelinayaa xafiisyada amaahda taas oo iyaduna saamaynaysa u -qalmitaankaaga deynta. Hubi inaad cusboonaysiiso amaahiyahaaga sababaha aad uga soo daahday lacag bixintaada.
Bixinta Deymaha Waqtiga.
Hayso Dheelitirka Kaarkaaga Amaahda ka hooseeya Limit: Haddii dayn -bixiyeyaashu ay ogaadaan inaad si wanaagsan uga baxdo xadkaaga amaahda waxay si xun u dhibayn doontaa sumcaddaada deynta. Sidaa darteed, heerka aad ku isticmaasho sumcaddaada ayaa saameyn weyn ku leh dhibcaha dhibcahaaga. Hubi inaad ilaaliso jidka ka hooseeya xadka ama dhexdeeda.
Jeeg joogto ah ku hay Dhibcahaaga Deynta: Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad si joogto ah u weydiisato warbixintaada amaahda xafiiska amaahda. Tani waa si loo hubiyo inaysan jirin macluumaad aan dhammaystirnayn ama aan sax ahayn oo lagu faahfaahiyay warbixinta.
Waa Maxay Dhibcaha Dhibcaha Wanaagsan ee Lagu Iibsado Guri?
Dhibcaha dhibcaha ugu yar ee loo baahan yahay si aad u hesho amaah guri waxay ku xiran tahay nooca amaahda aad damacsan tahay inaad tagto.
Codsadayaasha waxaa loo soo bandhigayaa ikhtiyaarka VA, Caadiga ah, amaahda FHA. Mid kastaa wuxuu leeyahay shuruudo ka hor inta aan la ansixin codsigaaga amaahda.
Si kastaba ha ahaatee, celcelis ahaan, dhibcaha amaahda ugu yar ee looga baahan yahay iibsashada guri waa 620. Wax kasta oo ka hooseeya ayaa u badan inay soo jiitaan dulsaar sare.
Amaahda caadiga ah:
Amaahda caadiga ah ma yihiin kuwa aan dawladu caymis lahayn. Waxaa bixiya hay'ado gaar loo leeyahay.
Si aad u hesho amaahda noocyadan ah dhibcahaaga amaahdu waa inuu ka sarreeyaa 700. Waxay bixiyaan qorshayaal lacag -bixin dabacsan oo aad u badan waana kuwa inta badan laga isticmaalo kuwa leh dhibcaha dhibcaha wanaagsan.
FHA waxaa caymis ka haysta dawladda. Lacag -bixinta hore waxay u hooseysaa 3.5% waxayna sidoo kale oggolaaneysaa dib -u -hagaajinta illaa 97% qiimaha guriga.
FHA waxay u fiican tahay kuwa leh dhibcaha dhibcaha hoose. Waxa loo tixgeliyo dhibcaha dhibcaha wanaagsan ee amaahda FHA waa 580 ama 620.
Haddii aad tahay ruug -caddaa ama xaaska halyeeyga waxaa laga yaabaa in deynta kugu habboon ay noqoto.
Iyada oo dhibcaha dhibcaha ee ugu hooseeya 580 hoose waxaad u qalmi kartaa qorshahan deynta. Waxay u muuqataa inaysan jirin shuruud ugu yar oo la dejiyay Amaahda VA xaaladaha qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad noqotaa ruug -caddaa Mareykan ah, xubin adeeg, ama xaaska halyeeyga si aad ugu qalanto.
Dhibcaha amaahda ugu yar ee lagu iibsado guri ku hoos jira deymaha USDA waa 620 ama si ka sarreeya 600. Deymaha USDA waa ikhtiyaarrada amaahda guryaha ee ay dawladdu taageerto.
Dhibcaha dhibcaha ee aadka u fiican lama gaadho habeen kaliya waa inaad keentaa edbinta maaliyadeed ee ugu fiican haddii aad doonayso inaad darajayso dhibco deyn oo wanaagsan.
Had iyo jeer hubi inaad iska hubiso warbixintaada deynta oo aad xiriir dhow la yeelato amaah -bixiyahaaga arrimaha ku saabsan bixinta lacag -bixinta dambe iyo deynta.
La soco dhaqankaan haddii aad fiirineyso sida loo gaaro dhibcaha dhibcaha wanaagsan.
Waa maxay dhibcaha dhibcaha ee hufan si aad u iibsato baabuur?
Dhibcaha dhibcaha ugu yar ee 660 ayaa hufan oo ku filan si aad u hesho baabuur.
Waa maxay dhibcaha dhibcaha ee muhiimka ah?
Dhibcaha si fiican uga sarreeya 700 ayaa loo arkaa mid aad u fiican.
Waa maxay warqad 609 ah?
Waraaqda 609 waa warqad muran ah oo ku qasbeysa hay'adaha amaahda inay ka saaraan qaar ka mid ah faahfaahinta taban ee warbixintaada deynta si kor loogu qaado dhibcaha dhibcahaaga.
Waa Maxay Dhibcaha Dhibcaha Aad U Baahan Tahay Inaad Gato Iibsato 2021? | Quicken Loic
Waa Maxay Dhibcaha Deynta Wanaagsan? - Experian
Sidee Loo Xisaabiyaa Dhibcaha Deynta? | Equifax®
Qodobka la xiriira
20 Kaarka Amaahda Safarka Ugu Fiican Sanadka 2021
17 Kaararka Amaahda ee Ugu Fiican ee Lacag -bixinta Xisaabta ee 2021
15 Kaararka Amaahda Ganacsiga ugu Fiican 2021
10 Tillaabo oo Wax ku ool ah si aad u hesho Amaah Ganacsi 2021
15 Hadiyadaha Farsamada Goynta-Ku-habboon ee Saaxiibbada Sanadka 2022-ka
Dunidu waxay ku dhawaad ​​100% ka samaysan tahay tignoolajiyada, taas oo noo sahlaysa si ka duwan sidii hore…
Wizard101 waa ciyaar saaxir online ah oo lagu dejiyay dugsiga Wizard ee sixirka, Ravenwood Academy. Ciyaartoyda da' kasta leh
Sida looga baxo deynta kaadhka deynta 2022
Deynta kaarka deynta ayaa ah arrin ugu weyn dad badan. Ku sidashada hadhaaga kaarka deynta ayaa…
Kaararka Amaahda Ugu Fiican 0% APR IYO 0% Dulsaar
Kaararka amaahdu waxay wax weyn ku soo kordhin karaan maalgelinta iibsiyada cusub iyo xoojinta deymihii hore. Qaar ka mid ah…
Ciyaarta tartanku sinaba ma aha fikrad cusub, laakiin fikradda ah in la yeesho ciyaar muuqaal ah oo xirfad leh…
Sida looga codsado Medicaid gudaha Michigan